Ch 15 Matiu – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Matiu / Ch 15 Matiu
15:1 Mgbe ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii bịakwutere ya si Jerusalem, si:
15:2 "Gịnị mere gị na-eso ụzọ mebiri ọdịnala ndị okenye? N'ihi na ha anaghị akwọ aka mgbe ha ha na-eri nri. "
15:3 ma-aza, O wee sị ha: "Ma gịnị mere unu mebiri ihe Chineke nyere n'iwu n'ihi ọdịnala unu? N'ihi na Chineke siri:
15:4 'Sọpụrụ nna gị na nne,'na, 'Onye ọ bụla ga-kọchaa nna ma ọ bụ nne ga-anwụ a ọnwụ.'
15:5 Ma ị na-ekwu: 'Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-gwara nna ma ọ bụ nne, "Ọ na-raara, nke mere na ihe ọ bụla dị n'ebe m ga-abara gị uru,"
15:6 mgbe ahụ ọ ga-gaghị asọpụrụ nna ya ma ọ bụ nne ya. 'Ya mere, nwere ị wepụ ihe Chineke nyere n'iwu, n'ihi ọdịnala unu.
15:7 ihu abụọ! Otú ọma ka Aịsaịa buru n'amụma banyere ị, si:
15:8 'Nke a na-asọpụrụ m ji egbugbere ọnụ ha, ma obi ha dị anya n'ebe m.
15:9 Maka n'efu ka ha na-efe m, -ezi ndị ozizi na iwu nke mmadụ. " '
15:10 O we kpọ ìgwè madu ya, O wee sị ha: "Geenụ ntị ma ghọta.
15:11 Otu nwoke na-emerụghị site ihe na-abanye n'ọnụ, kama ọ bụ ihe na-esi n'ebe ọnụ. Nke a bụ ihe na-emerụ mmadụ. "
15:12 Eso ụzọ ya wee na-eru nso, si ya, "Ị maara na ndị Farisii, nụrụ okwu a, iwe were?"
15:13 Ma na O kwuru: "Ọkụkụ ọ bụla nke na a kụrụ n'akụkụ Nna m nke eluigwe ga-efopụ.
15:14 Ahapụ ha. Ha na-ìsì, na ha na-edu ndị kpuru ìsì. Ma ọ bụrụ na ndị ìsì na-na-elekọta ndị ìsì, abụọ ga-adaba n'olulu. "
15:15 Na-aza, Pita wee sị ya, "Kọwaa ilu a anyị."
15:16 Ma ọ sịrị: "Ị, ọbụna ugbu a, enweghị nghọta?
15:17 Ị na-aghọta na ihe niile na-abanye n'ọnụ na-aga n'ime gootu, na a na-atụpụ ya n'olulu nsị?
15:18 Ma ihe na-esi n'ebe ọnụ, ọwọrọde obi, na ndị na ihe ndị na-emerụ mmadụ.
15:19 N'ihi na site n'obi pụọ ọjọ echiche, igbu, ikwa-iko-, ịkwa iko, thefts, ịgba akaebe ụgha, nkwulu.
15:20 Bụ ihe ndị a na-emerụ mmadụ. Ma na-eri na-enweghị saa aka adịghị emerụ mmadụ. "
15:21 Na si n'ebe, Jesus gawa ebe nke Taia na Saidon.
15:22 Ma, le, a nwaanyị Kenan, -aga site na ndị na-akụkụ, tikuru, na-asị ya: "Were ebere m, Jehova, Nwa Devid. Nwa m nwaanyị na-merụsịrị nọ n'ahụhụ na mọ ọjọ ji. "
15:23 O sigh a okwu ya. Na-eso ụzọ ya, -eru nso, rịọrọ ya, si: "Nsio enye, n'ihi na ọ na-etiku mgbe anyị. "
15:24 Na-aza, o kwuru, sị, "M e zigara ma e wezụga atụrụ dara adịpụ n'ebe ụlọ nke Israel."
15:25 Ma ọ gakwuuru ya ma adored ya, si, "Onyenwe anyị, nyere m aka."
15:26 Na-aza, o kwuru, sị, "Ọ dịghị mma iwere nri nke umu tubà ya ya nkịta."
15:27 Ma ọ siri, "Ee, Jehova, ma-eto eto na nkịta na-eri si crumbs na-ada esi na tebụl nna ha ukwu. "
15:28 Mgbe ahụ, Jizọs, na-aza, si ya: "Gị nwaanyị, oké okwukwe-unu. Ka agēme kwa ka unu dị nnọọ ka ị chọrọ. "Ma gwọọ nwa ya nwaanyị malite n'oge awa ahụ.
15:29 Na mgbe Jizọs agafewo si n'ebe, ọ bịarutere n'akụkụ oké osimiri Galili. Na-arịgo n'elu a ugwu, ọ nọdụrụ ala n'ebe.
15:30 Na oké ìgwè mmadụ bịakwutere ya, nwere na ha ndị ogbi, ndị ìsì, ndị ngwọrọ, ndị nwere nkwarụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha we tubà ha n'ala n'ụkwụ ya, o wee gwọọ ha,
15:31 ukwuu nke mere na ìgwè mmadụ ahụ na-eche, ịhụ ndị ogbi na-ekwu okwu, ndị ngwọrọ na-eje ije, ndị ìsì. Ha uku Chineke nke Israel.
15:32 Na Jizọs, akpọ ọnụ-eso ụzọ ya, kwuru: "M nwere ọmịiko na ìgwè mmadụ, n'ihi na ha bụ ndị tachiworo na m ugbu a ruo ụbọchị atọ, ha na-enweghị ihe ọ bụla na-eri. M na-agaghị njikere na-eleghara ha, na-ebu ọnụ, ka ha ghara-ada mbà n'ụzọ. "
15:33 Na-eso ụzọ wee sị ya: "Si ebee, mgbe ahụ, na mbara, anyị ga-nweta ezuru achịcha ka afọ ju otú oké ìgwè mmadụ?"
15:34 Na Jizọs sịrị ha, "Olee otú ọtụtụ ogbe achịcha ị nwere?"Ma ha sịrị, "Asaa, ma ole na ole obere iyak. "
15:35 Na ọ gwara ìgwè mmadụ ahụ ka ha nọdụ ala.
15:36 Na-ewere ogbe achịcha asaa na azụ, ma na-enye ekele, ọ nyawara ma nye-eso ụzọ ya, na-eso ụzọ nyere ndị mmadụ.
15:37 Ha niile wee rie, rijuo afọ. Na, si ihe fọdụrụnụ nke iberibe, ha wee na-asa zuru nkata.
15:38 Ma ndị na-rie puku ndị ikom anọ, plus ụmụaka na ndị inyom.
15:39 Na ebe asuan otuowo, ọ rịgoro a ụgbọ mmiri. , O wee banye ala gbara osimiri okirikiri n'ógbè Magadan.